DF Somaliya oo ka hadashay hooyo Soomaaliyeed oo sheegtay in gabadheeda ay heystaan Ilaalada Madaxtooyada | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Somaliya oo ka hadashay hooyo Soomaaliyeed oo sheegtay in gabadheeda ay...
DF Somaliya oo ka hadashay hooyo Soomaaliyeed oo sheegtay in gabadheeda ay heystaan Ilaalada Madaxtooyada
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada, Cabdinuur Maxamed Axmed.
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadashay eedeymo xooggan oo ka soo yeeray hooyo degan Magaalada Muqdisho, taa oo sheegtay in gabar yar oo ay dhashay, ay haystaan Ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya.
Hooyo Amran Xalane ayaa wareysi ay siisay Dalsantv ku sheegtay in gabadheeda oo dalka dibadiisa looga keenay inay Qur’aanka Kariimka ku barato Magaalada Muqdisho, ay gabadho kale u geeyeen laba ka mid ah Ilaalada Villa Somalia, oo midkood uu Sarkaal yahay.
Hooyo Amran Xalane ayaa sheegtay in mid ka mid ah labadaasi askari uu la soo xiriiray, isagoo weydiistay inay bixiso laba kun oo dollar, isla-markaana uu meel ku ogyahay gabadheeda.
Hooyadan ayaa xustay in labadaasi nin la soo xiray, kiiskoodana ay gacanta ku hayso Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida. Sidoo kale waxay sheegtay in la soo xiray laba ka mid ah gabadhihii askarta u geeyay gabadha ay dhashay, hase ahaatee ay damaanad ku sii deysay Hay’adda Dembi Baarista Cid.
Kiiskan oo weji gabax ku noqonaya Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa qoraal kaga hadlay Cabdinuur Maxamed Axmed, Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada.
Agaasimaha oo qoraalkan dadka kula wadaagay bartiisa Facebook ayaa u qornaa sidatan:-
Waan maqalnay qaylo dhaanta hooyo Amran Maxamed Cismaan oo illaa shalay baraha bulshada lagu faafinayay, waxaana xiriir la sameynay Maxakamadda kiiska gacanta ku haysa, xeer ilaaliyaha dacwada soo oogay iyo Madaxda askarta la eedeeyay.
Waxaa ii muuqata in baaritaan daahfuran loo baahanyahay si la isu waafajiyo cabashada hooyada iyo aragtida ay qabaan qaybaha kala duwan ee kiiska ku lug leh. Xoguhu sida qolo walba u tabinayso waa wax kala fog.
Inta taas laga xaqiijinayo, waxaa haboon in laga fogaado buunbuuninta wararkan hubinta u baahan, warbaahintuna waa in ay dheeli-tir ku sameyso waxa ay bulshada la wadaagayso si aan loo sii abuurin jahwareer kale.
Inkasta oo aysan ii suurta galin inaan la hadlo hooyo Amran oo aan dhawr jeer wacay, hadana waxaan is maqalnay dad ehelka ka mid ah, waxaana u xaqiijiyay inaan cadaaladda ku garab istaagayno ayada iyo qof kasta oo dhibane ah, loona baahanyahay inaan laga hordhicin baaritaanada haatan socda.
Waxaan u mahadcelinayaa dadkii tirada badnaa ee dareenka ka muujiyay, kuwa farriimaha noo soo diray iyo inta na soo wacday. Dareenkaas islaamnimada iyo Soomaalinimada ah waad ku ammaanan tihiin.
Hooyo Soomaaliyeed oo gabadheeda heystaan ilaalada madaxtooyada Somaliya